Iscreen esisebenzayo se-iPhone 13 iya kuba yi-ace phezulu kwisingxobo sakho | IPhone iindaba
Isikrini esoloko sikwi-iPhone 13 iya kuba yi-ace phezulu kwisingxobo sayo
Isibhengezo se-iPhone 13 sisondela, kwaye nangona zizakubakhona ezinye iindaba ezibalulekileyo, Into ekuthiwa incinci njengesiqhelo esikrinini inokuba yeyona asethi yakho intle.
Umzuzu xa siza kubona i-iPhone 13 isondela, mhlawumbi kule nyanga inye kaSeptemba, kwiinyanga nje ezimbini ukusukela namhlanje. Kuninzi esele kuthethiwe malunga nezinto ezintsha, ezinje nge Okona kubalaseleyo kwikhamera, uhlala wamkelekile, kunye nescreen sayo seMotion True screen esine-120Hz, njengale IPad Pro esele inayo kwizizukulwana ezininzi. Nangona kunjalo, kukho into malunga nokuncinci okuthethiweyo: isikrini esoloko-sikwi-screen. IbinguMark Gurman ozise le nto intsha, nangona bekukho amarhe malunga noku kusebenza kwizizukulwana ezininzi, kwaye into ebonakala ingabalulekanga inokuthetha utshintsho olukhulu kwi-iPhone.
I-Apple Watch yayisisixhobo sokuqala se-Apple sokuba nescreen esoloko sikwi-screen, "Soloko Ubonisa", ukusukela kuthotho lwesi-5. Ndatsiba eso sizukulwana se-Apple Watch, kodwa ndiye ndawela ngochungechunge lwe-6, ekwabandakanya oku kusebenza. Abanye abasebenzisi bayayikhubaza kuba ibandakanya ukusetyenziswa kwebhetri ephezulu, kodwa inyani kukuba xa sele uyiqhelile, kunzima ukuyishiya into ekunika yona. Ewe, ibhetri iyaphela ngokukhawuleza, kodwa iApple iphumeze oku kusebenza ukuze impembelelo iphantsi kangangoko kunokwenzeka, kwaye kuncinci kakhulu ukuba usebenzisa iinkalo apho umbala omnyama ubalaseleyo, kuba onke amalungu amnyama esikrini izakucinywa. Itekhnoloji kulindeleke ukuba ifane kakhulu kwi-iPhone 13.
Kwiwotshi ikuvumela ukuba ubone ixesha ngaphandle kokujika isihlahla sakho, kodwa kwi-iPhone oku kusebenza kunokuqhubeka ngakumbi, kwaye ukuba iApple iyongeza kwimodeli entsha ye-iPhone, kuya kufuneka iyisebenzise ngokupheleleyo. Ithetha ntoni le nto? Ngekhe kubekho ndawo kwiscreen sokutshixa apho konke esikubonayo lixesha, yinto eyenzekayo ngalo mzuzu xa isikrini sisebenza. Ukuba ngoku sinescreen esihlala sikhona, siyakwazi ukubona ulwazi oluthe kratya, njengenani lezaziso esinazo, kwaye kutheni kungenjalo imozulu kwindawo yethu, okanye ukuqeshwa kwekhalenda okuzayo. Oko kukuthi, ukuba isikrini esoloko sihlala sifika, kufuneka sifike notshintsho kuyilo lwescreen sokutshixa, kwaye yinto leyo ebesiyilindile ixesha elide.
Sele siyazi i-iOS 15, kodwa iApple ihlala ine-ace sleeve nge-smartphone yayo entsha, kwaye ndiqinisekile ukuba siza kubona iindaba ze-iOS 15 esingakhange siboniswe kuzo kwinkcazo yokugqibela ye-Keynote kuba kuya kufuneka silinde Kukhutshwa i-iPhone 15, njengoko iya kuba lutshintsho olukhethekileyo kule smartphone. Kulabo bethu abaza kutshintshela kwimodeli entsha ye-iPhone, ezi ziindaba ezimnandi, hayi kakhulu kwabo baceba ukuhlala nemodeli yabo yangoku.. Kwaye ukuba iscreen esihlala sikwi-screen sibandakanyiwe kwi-iPhone 13, kufuneka silinde ukuvala isikrini, ekugqibeleni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iifowuni zePhone » iPhone 13 » Isikrini esoloko sikwi-iPhone 13 iya kuba yi-ace phezulu kwisingxobo sayo
UWhatsApp sele esivumela ukuba sijoyine umnxeba wevidiyo ngalo naliphi na ixesha
Uluguqula njani ukhetho lokufikelela kwizicelo ezikwi-iOS 15